तपाईं आकर्षक जवाफ पाउनुहुन्छ!
येशूले जमीन मा यस्तो लेखे जहाँ बाइबल पद (यो जमीन, छैन बालुवा छ), हामी adulteress को कथा फरिसीहरू र शास्त्रीहरूले द्वारा stoning संग धम्की पाउन।
यूहन्ना 8: 6-8। यो तिनीहरूले उहाँलाई आरोप कुरा छ, उसलाई मोहक भने, र। तर येशूले तल बाङ्गो र जमीन आफ्नो औंला लेखे।7तिनीहरूले उभिएर सोधे, त्यो उठे र भने: "। पाप बिना छ जसले उनको मा पहिलो ढुङ्गा डाली सक्छ" 8 त्यसपछि उहाँले तल stooped र जमीनमा लेखे।
म येशू बालुवा मा यस्तो लेखे के एक पटक आग्रह गरियो। तपाईं आकर्षक जवाफ पाउनुहुन्छ।
हामीलाई राम्रो यसलाई बुझ्न कि सम्पूर्ण सन्दर्भमा पढ्न गरौं।
यूहन्ना 8: 2-11
बिहान सबेरै उहाँले मन्दिरमा साइट फिर्ता आए। सबै मानिसहरू उहाँको वरिपरि भेला र उहाँले बसे र तिनीहरूलाई सिकाउनुभयो।3त्यसपछि उहाँलाई ल्याए शास्त्री र फरिसीहरूको एक महिला व्यभिचार लिइएका। तिनीहरूले4को सामने उनको राख्नु र भन्नुभयो, "शिक्षक, यो महिला त्यो व्यभिचार।5प्रतिबद्ध जब कानून मोशाले मा गर्न पत्थर तपाईँले के भन्छन्। हामीलाई आज्ञा छ, कार्यमा मा समातियो?"6यो तिनीहरूले उहाँलाई मोहक, र उहाँलाई आरोप कुरा छ, भन्नुभयो। तर येशूले तल बाङ्गो र जमीन आफ्नो औंला लेखे।7तिनीहरूले उभिएर सोधे, त्यो उठे र भने: "। पाप बिना छ जसले उनको मा पहिलो ढुङ्गा डाली सक्छ" 8 त्यसपछि उहाँले तल stooped र जमीनमा लेखे।9 तिनीहरूले यो सुने, तिनीहरू टाढा, एक गरेर, प्राचीन पहिलो गए एक, र उहाँले महिला त्यहाँ खडा संग एक्लै बाँकी थियो। 10 येशूले सोझो र, तिनलाई भन्नुभयो "ए नारी, जहाँ तिनीहरू? कुनै एक तपाईं दोषी छ?" 11 त्यो, जवाफ "होइन, प्रभु, छैन।" येशूले "न त म दोषी गर्छन्!। जाओ र कुनै पाप", भन्नुभयो
येशूले वचन र काम मा प्रदर्शन
येशू भन्नुहुन्छ के पाप बिना छ जसले पहिलो ढुङ्गा डाली, र तिनीहरूले पाप बिना थिए किनभने त्यसपछि तिनीहरूले टाढा येशूको शब्दहरू द्वारा प्रहार भयो कि यो प्रसिद्ध बाइबल खण्डमा हामी अक्सर मात्र हाइलाइट छन्।
तर येशूले भन्छ सम्बन्धित आफ्नो औंला जमीनमा दुई पटक लेखन को कार्य।
यो फरिसीहरू र शास्त्रीहरूले गरे। तिनीहरूले येशूको प्रदर्शन गर्न mistook।
तिनीहरूले सुने येशूले भन्नुभयो र तिनीहरू उहाँले चाहनुभएको ठ्याक्कै थाह त, आफ्नो प्रदर्शन देखे के। तिनीहरूले बाइबल भित्र सकिनँ र बाहिर र यो के थियो थाह थियो।
"म बाट टाढा गिरावट गर्नेहरूले बालुवा मा एक लेखन जस्तै छ"
पुरानो नियममा यर्मिया मा लेखिएको छ:
परमप्रभु, इस्राएलका आशा। तपाईं त्याग्नुहुन्न जो कोहीले अभाव हुनेछ। म बाट टाढा गिरावट गर्नेहरूले बालुवा मा एक लेखन जस्तै छ। तिनीहरूले परमप्रभु जीवित पानी फोहरा त्याग्ने।
येशूले फरिसीहरूको यो कार्य द्वारा देखाए र शास्त्री टाढा खसेको र परमेश्वरको त्याग्ने थियो।
त्यसपछि पनि पाप बिना भएकाहरूलाई पहिलो ढुङ्गा डाली बताए गर्दा तिनीहरूले पत्थर जारी र किनभने येशूले तिनीहरूले परमेश्वरको टाढा खसेको र बालुवा मा एक लेखन जस्तो थियो कि जमीन मा लेखेर देखाए टाढा हिंड्न भन्दा अन्य केहि गर्न सकेन।
के बालुवा मा लेखिएको छ जो लेखन हुन्छ? पानी र हावा को धमिल्याउने।
यर्मिया 17:13 द्वारा टिप्पणी
प्रभु इस्राएलका आशा छ
बस प्रभु इस्राएलका आशा रूपमा उहाँले आफ्नो आशा छ। के तपाईं येशू प्राप्त गरेको छ, तपाईं भविष्य र आशा छ। ढिलो हुनुभन्दा तपाईं प्राप्त गर्नुभएको छ भने छैन येशूले गर्नेछ।
आफूलाई त्याग्नुहुन्न जो कोहीले अभाव हुनेछ
रूपमा लामो तपाईं बाँच्न येशू समात्नुहोस्। त्यसपछि तपाईं एक दिन तपाईं स्वर्ग घर आउन गर्दा सुरक्षित अन्त हुनेछ। तर उहाँलाई छोडेर तपाईं लाज गर्न राख्नु हुनेछ। र कुनै एक लज्जित हुन चाहनुहुन्छ?
म बाट टाढा गिरावट गर्नेहरूले बालुवा मा एक लेखन जस्तै छ।
यो येशूको पनि फरिसीहरू र शास्त्रीहरूले गर्न प्रदर्शन जो एक हडताली र unbeatable विवरण छ। तिनीहरूले येशूको तिनीहरूले यर्मिया 17:13 मा लेखिएको छ राम्ररी के थाह किनभने तिनीहरूले ढुङ्गा गर्न adulteress धम्की जब बालुवा मा यस्तो लेखे तुरुन्तै के बुझे। त्यहाँ प्रभु छोडेर गर्न भारी नतिजा हो। बालुवा मा लेखिएको छ जो लेखन हावा र पानी द्वारा मेटिनेछ।
तिनीहरूले प्रभु त्याग्ने
किन एक बालुवा लेखिएको जस्तो? किनभने तिनीहरूले प्रभु त्याग्ने।
जिउँदो पानी को स्रोत
येशूले जीवनको पानी छैन। त्यसपछि उहाँलाई प्राप्त su सुरक्षित र अनन्त जीवन प्राप्त। उसलाई छोड्न फरिसीहरू र शास्त्रीहरूले गरे। तिनीहरूले यर्मियालाई 17:13 अनुसार जिउँदो पानी को स्रोत त्याग्ने थियो, र त्यसपछि कुनै अनन्त जीवन थियो।
Vecka 25, fredag 25 juni 2021 kl. 03:03